फ्रान्सको सुरक्षा गार्डमा नेपाली जान पाइने, यस्तो छ सरकारको तयारी.. - Samaj Patra
फ्रान्सको सुरक्षा गार्डमा नेपाली जान पाइने, यस्तो छ सरकारको तयारी..
चैत्र ७, २०७८ चैत्र ७, २०७८ - by Samaj Patra
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले फ्रान्स रोजगारीका लागि पनि लबिङ सुरु गरेका छन् । फ्रान्सको सुरक्षा गार्ड तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदारको अभाव छ ।
त्यसैले, फ्रान्सले विभिन्न मुलुकसँग कामदारका लागि छलफल गरिरहेको छ । फ्रान्सको आवश्यकताअनुसार मन्त्री श्रेष्ठले पनि नेपाली कामदार पठाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका छन् ।
गत साता श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओलेबीच भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली युवाका लागि फ्रान्समा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सो अवसरमा राजदूत बुर्बाओले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका लागि फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने बताएका थिए ।
साथै, कोभिड महामारीपछि फ्रान्सको पर्यटन उद्योगमा पनि नेपाली श्रमिकहरूका लागि रोजगारी सिर्जना हुने बताएका थिए । राजदूत बुर्बाओले फ्रान्समा रोजगारीका लागि भाषा तथा व्यावसायिक तालिमको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने बताएका थिए ।
भने फ्रान्समा फ्रान्सेली नागरिकसरह नै विदेशी कामदारले पनि पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा उपभोग गर्न पाउने बताएका थिए । फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभई सुरक्षा क्षेत्रमा पनि नेपाली युवा पठाउने सकिने मन्त्री श्रेष्ठको अनुमान छ ।
यौ,न सम्बन्धबारे रोचक तथ्य थाहा छ ? नेपालमा छन् यस्ता भ्रम
भारतले हवाई रुट नदिए के हुन्छ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, के भन्छ भारत ?
जेष्ठ २, २०७९ जेष्ठ २, २०७९
कतारले कोरोनाको चौथो डोज खोप लगाउन अनुमति दियो, यस्ता ब्यक्तिले अनिवार्य लगाउनुपर्ने..
चैत्र १७, २०७८ चैत्र १७, २०७८
Previous Article मलेसियाको यो कम्पनीमा कोही नआउन गरे आग्रह
Next Article पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, चैत्र ८ गते मगंलबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल